Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): August 2012
ဘိုင်အို ရစ်သမ် အပိုင်း (၁) ဗေဒင် မဟုတ်သော- ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့်။
ကျွန်တော်က- နက္ခတ် ကို လေ့လာသူ ဖြစ်၏။
ဤတွင် ပြဿနာ တစ်ခုက တင်ရှားစွာ ရှိနေ၏။
ထိုပြဿနာကား- မွေးချိန် ပြဿနာ ဖြစ်၏။
မွေးချိန် မသိသူများ၊ သိသော်လည်း မသေချာသူများက- များပြားစွာ ရှိကြသည်ကို ကြုံတွေ့လာရသော အခါ- မွေးနေ့- သိရုံမျှဖြင့်- ဟောပြောနိုင်သော ရာသီခွင် ဟောချက်များ၊ မဟာဘုတ်၊ သက်ရောက်၊ အဋ္ဌလဂ် စသော ပညာရပ်များ ရှိသည်မှန်သော်လည်း- ၄င်းတို့က- ကျွန်တော့် လိုင်းမဟုတ်။
ပွင့်လင်းစွာ ၀န်ခံရသော်- ထိုသူတို့ အတွက် အကြံမပေးတတ်တော့ပေ။
မိနစ် အနည်းငယ်မျှ ကွာရုံဖြင့်- ကံကြမ္မာများ ကွာခြား နေကြကြောင်း၊ တစ်မြို့တည်း၊ ဆေးရုံ တစ်ခုတည်း- မိနစ် အနည်းငယ် ကွာရုံမျှဖြင့်- စရိုက်ချင်း၊ ဘ၀ အကျိုးပေးချင်း မတူညီ ကြသော အမွှာများကို လက်တွေ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြုံတွေ့လာရသော အခါ- အချိန် သိစရာ မလိုပဲ- မွေးနေ့ တစ်ခုတည်းကိုသာ မူတည် ဟောပြောသော နိုင်သော အနေအထား ကျွန်တော့်တွင် မရှိ။
ဆေးရုံတစ်ခုတည်း- မိနစ် အနည်းငယ် ကွာမွေး၍- နာမည် မတူသောကြောင့်- ကံကြမ္မာချင်း မတူ ဖြစ်သည်ဟု ပြောရအောင်လည်း- များစွာသော အမွှာ တို့မှာ- နာမည် ဆင်တူ (အက္ခရာ-အစ-အဆုံးများ- နံသင့် တူကြသည်လည်း ရှိ၏။)။ ဥပမာ- မနန်းစိုး- မနန်းစံ၊ အေးအေးငြိမ်း- အိအိငြိမ်း၊ စသည်ဖြင့်- အစ-အဆုံး နံခြင်း တူနေက- နာမက္ခရတိုင် စသည် တို့ နှင့် ဆိုသော် အတက် အဆင်းချင်း တူကြသည် ဖြစ်၏။
သို့သော်လည်း စရိုက်၊ အကြိုက် စိတ်ဓါတ်၊ ကံကြမ္မာ မတူနိုင်ကြ။ နေ့သိရုံဖြင့် ဟောနိုင်သော ပညာရှင်များ ရှိနိုင်သော်လည်း- ကျွန်တော့် အနေဖြင့် တော့ - နေ့သိရုံဖြင့်- မဟောနိုင်ပါ။
တစ်ဖန် မွေးချိန်ကို အကြမ်းအားဖြင့်- သိသော်လည်း- မသေချာသူများ အတွက်- မွေးချိန်ပြန်ညှိပေးရသော အလုပ်သည်- ဇာတာရှင်၏ ရုပ်ရည်၊ ပညာ၊ စိတ်ဓါတ်၊ စရိုက်၊ ဘ၀တွင် အရေးပါသော ဖြစ်ရပ် စသည်များမှ ပြန်လည် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး၍ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်- မိနစ်ချင်း၊ ပြန်လည် စိစစ်ပေးရခြင်း ဖြစ်လေရာ-ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ များစွာ လိုအပ်သည်သာ မက- လွန်စွာ အချိန်ကုန်သဖြင့်- မေးမြန်း လိုသူများ အတွက်လည်း- ကုန်ကျ စရိတ် လွန်စွာ များ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင် တို့သည်- ဟောချက်မပါသော မွေးချိန် ပြန်စစ်ပေးခြင်း သက်သက် ကို အလွန်ဈေးကြီးစွာ သတ်မှတ်ထားကြ၏။
သို့သော်လည်း- မေးမြန်း လာသူတို့ကို- တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးလို၏။
တစ်ဖန်- လူကိုယ်တိုင် ဟောပြောခြင်း၊ အွန်လိုင်း ဟောပြောခြင်း၊ ဟောစာတမ်း ရေးပေးခြင်း အားလုံးကိုလည်း အချိန်မပေးနိုင်သောကြောင့် ရပ်တန့်ထားရ၏။
ဒီတော့လည်း- လိုအပ်လာသူ အများစုကို- ဗေဒင် ဆရာထံ မေးစရာမလိုပဲ- မိမိကိုယ်တိုင် - ဒီနေ့ ဘာလုပ် သင့်သည်။ ဘယ်နေ့ တွင် ဘာလုပ်သင့်သည် ဆိုသည်ကို အလွယ် သိနိုင်သော နည်းတစ်နည်းကို လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်မည် ဟု ဆုံးဖြတ်မိ၏။
ထိုနည်းသည်ကား- ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms နည်း ဖြစ်၏။
မှန်သည်-မှားသည်၊ တိကျသည်၊ မတိကျသည်ကတော့- စာဖတ်သူများ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်၏။
ကျွန်တော်က လက်ဆင့်ကမ်းရုံ သက်သက်မျှသာပင်။
ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms ဆိုသည်မှာ-
ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms ခေါ် ဇီဝ စည်းချက်နရီ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ အရာအားလုံး တို့သည် အချိန်မှန်မှန် လည်ပတ်နေကြသော- Cycle သဘော ဖြစ်နေကြခြင်းကို အခြေခံ ထား၏။
ကမ္ဘာကြီးသည်- နွေ၊မိုး၊ဆောင်း တို့တွင် အတိမ်းအစောင်း ပြောင်းလျှက်- ၃၆၅.၂၅ လျှင် တစ်ပတ် အနေဖြင့် နေကို လည်ပတ် နေသကဲ့သို့- လမင်းသည်လည်း- ၂၉-ရက်ခွဲ လျှင် တစ်ပါတ် ကျဖြင့် ကမ္ဘာအား လှည့်နေ၏။
လူသား၊ တိရစ္ဆာန် တို့သည်လည်း-၂၄-နာရီ ကာလ၊ နံနက်- နေထွက်သည်မှ ညနေ-နေ၀င်သည် အထိ- အိပ်ယာထ-အစာရှာ၊ အစာစား၊ နေထိုင် လုပ်ကိုင်၊ အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်- ပုံမှန် လည်ပတ် နေကြ၏။
ထိုနည်းတူပင်- လူတို့၏ သက်တမ်းအားလည်း- ဇီဝ နာရီ biological clock အားဖြင့် သဘာဝ တရားကဆုံးဖြတ် ထား၏။
အိပ်စက်နေကြစဉ်မှာပင်- REM (Rapid Eyes Movement) တို့ဖြင့် ပါဝင်နေသော- Sleep Cycle ဖြင့် အိပ်စက်ကြ၏။ ထို Sleep Cycle ကို ကြားဖြတ်ခြင်း မရှိပဲ အိပ်စက် တတ်ပါက- အိပ်ချိန် အနည်းငယ်မျှဖြင့်ပင်- အိပ်ရေးဝ လန်းဆန်း၏။
တရုပ် ကိုယ်ခံ ပညာ၊ အပ်စိုက်ပညာ၊ ယိချင်းပညာ များတွင်- လူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်- ချီဓါတ် (အသက်ဓါတ်) ဆုံချက် နေရာများ- အချိန်မှန်မှန် ပြောင်းလဲ နေခြင်းကို ရှေးယခင်က သင်ကြားခဲ့ကြ၏။
ဒီရေ တို့သည်- လ-ဆန်း၊ လ-ဆုတ်ကို မူတည်၍- ပုံမှန် အတက်အကျ တို့ ပြောင်းနေ၏။
၁၉-ရာစုတွင် ဂျာမဏီ နိုင်ငံ ဘာလင်မြို့တွင် သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Wilhelm Fliess မှ ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms ခေါ် ဇီဝ စည်းချက်နရီ ကို စတင် လေ့လာခဲ့၏။
သူ၏ တွေ့ရှိချက်မှာ- လူတစ်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စွမ်းအား အခြေအနေ များသည် ၂၃-ရက်တစ်ခါ စည်းချက် ကျနေသကဲ့သို့၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခံစားမှု အတက်အကျ တို့သည်လည်း ၂၈-ရက် တစ်ခါ အတက်အကျ စည်းချက် ညီနေသည် ဖြစ်၏။
လူတိုင်း အနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင်- အင်အားများ ရှိနေသကဲ့ သို့ ခံစားရနေတတ်ပြီး၊ တစ်ခါ တစ်ရံတွင် ပင်ပန်း နုံးချည့် နေသကဲ့ ဖြစ်နေတတ်သည်များမှာ- ပုံမှန် စည်းချက် သဘွယ် ဖြစ်နေသည်ဟု သူတွေ့ရှိခဲ့၏။
ဤသီအိုရီ သဘောကို မူတည်၍- လူတစ်ဦး အနေဖြင့်- မိမိ၏ စီးပွားရေး၊ အားကစား ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ ပညာရေး တို့တွင် အကောင်းဆုံး အနေအထား ရအောင် အသုံးချနိုင်မည် ဖြစ်၏။
မတော်တစ်ဆ ဖြစ်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး အနေအထား တို့နှင့်- တစ်ဘက်သူ နှင့် ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင်တို့ တွင်ပါ- ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms ခေါ် ဇီဝ စည်းချက်နရီ အသုံးချကြလာကြ၏။
ဘိုင်အို ရစ်သမ် biorhythms ခေါ် ဇီဝ စည်းချက်နရီ သည်- မွေးချိန်က စတင်ခဲ့သည် ဆို၏။ အင်အား ပမာဏ အပေါင်းမှ အနှုတ်သို့ ဖြစ်စေ၊ အနှုတ် မှ အပေါင်းသို့ ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်း သည့် ရက်ပိုင်းသည်- အရေးပါသော ရက်များ ဖြစ်၏။ ထိုကာလတွင် သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည် တို့သည် မတည်ညိမ်သော အနေအထားတွင် ရှိနေသဖြင့်- အထူးသတိပြုသင့်သည် ဟု ဆိုကြပါ၏။
၄င်းတို့ကို အောက်တွင် ရှင်းပြပေးထားပါသည်။
Primary rhythms ခေါ် ပဓာန စည်းချက် နရီ များ။
ပဓာန စည်းချက် အနေဖြင့်- အောက်ပါ အတိုင်း ၃-မျိုးရှိပါသည်။
ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်
စိတ်ခံစားမှု ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်
ဥာဏ်စွမ်းပိုင်း ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်
ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်။
၂၃-ရက်တစ်ကြိမ် လည်ပတ်နေသော ထိုစည်းချက်တွင်- ၄င်း ကဏ္ဍ အနေဖြင့် အင်အား ကောင်းနေပါက- မိမိ၏ အင်အားပိုင်း၊ ခံနိုင်ရည်ပိုင်း၊ စွမ်းအား နှင့် ကျန်းမာရေး တို့အတွက် ကောင်းသည် ဟု ဆိုပါသည်။
အကယ်၍- မတည်ညိမ်သော- အနေအထားသို့ ရောက်နေသော ရက်ပိုင်းတွင်- စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ မီး နှင့် လျှပ်စစ် အသုံးအဆောင်များ သုံးစွဲရာတွင် လည်းကောင်း၊ မော်တော်ယဉ်များ မောင်းနှင်ရာတွင် လည်းကောင်း ထိခိုက်၊ ဒဏ်ရာရမှု များ ဖြစ်တတ်သော အခြေအနေ များရှိတတ်သည်။ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းမျိုး လည်း ဖြစ်တတ်သောကြောင့် သတိထားရမည် ဟု ဆိုပါသည်။
စိတ်ခံစားမှု ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်။
၂၈-ရက်တစ်ကြိမ် လည်ပတ်နေသော ထိုစည်းချက်တွင်- ၄င်း ကဏ္ဍ အနေဖြင့် အင်အားကောင်းနေပါက- စိတ်တည်ညိမ်မှု၊ အကောင်းသဘော ခံယူနိုင်မှု၊ နားလည် ပေးနိုင်မှု- အများတကာ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန်တို့ အတွက် ကောင်းသည် ဆိုပါသည်။
အကယ်၍- မတည်ညိမ်သော- အနေအထားသို့ ရောက်နေသော ရက်ပိုင်းတွင်- မိမိ လုပ်ကိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်မှ အစ- လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး တို့တွင်ပါ- ပြဿနာ မျိုးစုံ ဖြစ်တတ်သော အခြေအနေ များရှိတတ်သည်။ မိမိ၏ စိတ်ခံစားမှု ကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်လာတတ်သောကြောင့် ဆင်ခြင် ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ဆိုပါသည်။
ဥာဏ်စွမ်းပိုင်း ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စည်းချက်။
၃၃-ရက်တစ်ကြိမ် လည်ပတ်နေသော ထိုစည်းချက်တွင်- အင်အား ကောင်းနေပါက- မိမိ၏ ဥာဏ်ပြေးမှု၊ နှုတ်မှု စွမ်းရည်၊ အတွက်အချက် စွမ်းရည်၊ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော် အောင် တွေးကြံနိုင်မှု တို့ အတွက် ကောင်းသည် ဆိုပါသည်။
အကယ်၍များ- မတည်ညိမ်သော၊ နိမ့်ဆင်းနေသော ကာလပိုင်းနှင့် ဆုံနေခဲ့ပါမူ- ကျိုးကြောင်း ညီညွတ်မှု နည်းပါးသော၊ လက်တွေ့ မဖြစ်နိုင်သော၊ ကိုယ်တိုင် တကယ် နားမလည်သော အတွေးအခေါ်များ ဖြစ်နေတတ်ပြီး၊ အာရုံစုစည်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊ မစဉ်းစားပဲ အလျင်အမြန် ဖြစ်သလို ဆုံးဖြတ်မိတတ်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်သောကြောင့်- အရေးပါသော ကိစ္စများ အတွက် ဤကာလတွင် မလုပ်သင့်ပါဟု ဆိုကြပါသည်။
ဆက်လက် တင်ပြပေးမည့်- ဘိုင်အို ရစ်သမ် အပိုင်း (၂) တွင် သားသမီး- ယောက်ျား လေး၊ မိန်းကလေး ရနိုင်မှု ခန့်မှန်းခြင်း အကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
စာဖတ်သူ အားလုံး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ
“အာကာကို လွှာပုံပြုလို့ မေယုကိုတဲ့ စုတ်တံချီ” ဆိုသော စာသားလေး ကို ပြန်လည် ကြားယောင် မိတိုင်း၊ “မြင့်မိုရ် တောင်ဦး မကကျူးသော …” စသည့် အသုံးအနှုန်း များကို ဘုရားရှိခိုး၊ အမျှဝေ ပြုမိတိုင်း- မြန်မာ အခေါ် မြင့်မိုရ်တောင် တစ်နည်းအားဖြင့်- အခြား ဟိန္ဒူ၊ ဂျိန်း၊ ဂျာဗား လူမျိုးများ အခေါ် “မေယု” ကို သတိရမိသည်။
ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေး ဘ၀ - ပထ၀ီဘာသာရပ် ကို စတင်သင်ကြားခဲ့ရစဉ်က-
မြန်မာ စံတော်ချိန် မျဉ်းကြောင်း ကြီးသည် မည်သည့် မြို့ရွာ ဒေသများကို ကို ဖြတ်သန်း သွားသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
ဥတ္တရ ယဉ်စွန်းတန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ မည်သည့် မြို့ရွာများကို ဖြတ်သန်း သွားသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
ကမ္ဘာ့ ပထ၀ီတွင်လည်း အီကွေတာ မျဉ်းကြောင်းကြီးသည် ကမ္ဘာကြီးအား တောင်ခြမ်း နှင့် မြောက်ခြမ်း ကို ပိုင်းခြားထားသည်။ ဂရင်းနစ် စံတောင်ချိန် မျဉ်းသည် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဂရင်းနစ် ဒေသကို ဖြစ်သန်း သွားသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း မှတ်သား သင်ကြားခဲ့ ရသော အခါ -
ထိုမျဉ်းကြီးများ ကို ဘယ်သူကများ ဆွဲထားသလဲ- ဘယ်လို ဆွဲထားသလဲ- သွားကြည့်ယင် တွေ့ရမှာပဲ ဟု ထင်မှတ် မိခဲ့ပါသည်။
အတော်လေး နားလည် သော အရွယ်ရောက်မှပင် အမှန်တကယ် ထိုဒေသများ ရောက်၍ သွားကြည့်သော်မှ ထိုမျဉ်းကြီးများအား ပကတိ မျက်စေ့ နှင့် မြင်စရာ အကြောင်းမရှိ၊ စင်စစ် အားဖြင့်- ၄င်းတို့သည် မြေပုံ ပေါ်တွင် ဒေသများကို အမှတ် အသားပြုရန် သတ်မှတ် ပုံဖေါ်ထားသော မျဉ်းကြီးများ ဖြစ်ကြောင်း နားလည် ရပါတော့သည်။
ထိုမျဉ်းကြီး တကယ် ရှိမရှိ၊ ဆိုသည်ကို စာဖတ်သူ နားလည်ပြီး ဖြစ်၍- အကယ်၍ တစ်စုံ တစ်ယောက်က အီကွေတာ မျဉ်းဆိုတာ ရှိသလားဟု မေးလာခဲ့သော် စာဖတ်သူ မည်သို့ ဖြေမည်နည်း။
၄င်းတို့သည် အမှတ် အသား သင်္ကေတ အနေနှင့် တည်ရှိ၏။ ပကတိ ရုပ်ဝတ္ထု အသွင် အနေဖြင့် သွားကြည့်ပြီး မတွေ့၍ မရှိဟု၍ ဆိုစရာ မရှိပေ။
သို့သော်- လူသားတို့၏ သဘာဝ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသည် တစ်စုံတစ်ခု ရှိသည် ဟု တစ်ဦးဦး က ပြောလိုက်လျှင်- ပကတိ ရုပ်ဝတ္ထု အသွင် ကို အလိုလို လှမ်းမြင်ကြည့် မိလျှက်သား ဖြစ်နေ မိတတ်၏။
မြင့်မိုရ် ခေါ် မေယု တောင် နှင့် ပတ်သက်၍- ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ များ အနေဖြင့်- နားလည် ထားကြသည်မှာ- ယုဂန္ဓိုရ် အပါအ၀င် တောင်စဉ် ၇-ထပ်၊ သီတာ ၇-တန် တို့၏ အလယ်တွင် ယူဇနာပေါင်း ၈၄,၀၀၀ (ရှစ်သောင်း လေးထောင်) အမြင့်ရှိသော မြင့်မိုရ် တောင် တည်ရှိ၍ - ကျွန်းကြီး ၄-ကျွန်း ၏ ဗဟို ဖြစ်လေရာ- ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ ဒေသ သည် ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ျာ တောင်ကျွန်း ဖြစ်သည်။ မြင့်မိုရ် တောင်၏ ထိပ်တွင် တာဝတိံသာ နတ်ပြည် တည်ရှိပြီး၊ မြင့်မိုရ် တောင်၏ အလယ်တွင် စတုမဟာရာဇ် နတ်ပြည် နှင့် အခြားခြားသော ဂန္ဓဗ္ဗ နတ်များ၊ နတ် နဂါး၊ ဂဠုန် များသည် မြင့်မိုရ်တောင် ခြေတွင် ရှိသည် ဟု ဖြစ်ပါ၏။
ထိုယုံကြည်မှု တို့သည် မည်သည် အရာတို့မှ မြစ်ဖျားခံခဲ့မည် ဟု ထင်ပါသနည်း။
ပထမဦးစွာ- ဗြဟ္မဏ ၀ါဒ ဖြစ်သော ဟိန္ဒူ နှင့် ဂျိန်းဘာသာ တို့၏ မေယု ခေါ် မြင့်မိုရ် တောင် ကို လေ့လာ ကြပါအံ့။ မဟာဘာရတ္တ ကျမ်းတွင်- အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြထားသေး၏။
၄င်းကို ဖတ်ကြည့်လျှင်- ဂန္ဓမာ ဒန (Gandhamadana) နှင့် တကွ ကျွန်းကြီး လေးကျွန်း ကိုလည်းကောင်း၊ ဂင်္ဂါ (Ganga) မြစ် အကြောင်းကို လည်းကောင်း လည်း ဖေါ်ပြထားသည် ကို တွေ့ရပါဦးမည်။
"Sanjaya said,--'Stretching from east to west, are these six mountains that are equal2and that extend from the eastern to the western ocean. They are Himavat, Hemakuta, that best of mountains called Nishadha, Nila abounding with stones of lapis lazuli, Sweta white as the moon, and the mountains called Sringavat composed of all kinds of metals.3These are the six mountains, O king, which are always the resorts of Siddhas and Charanas. The space lying between each of these measuresathousand Yojanas, and thereon are many delightful kingdoms. And these divisions are called Varshas, O Bharata. In all those kingdoms reside creatures of diverse species. This (the land where we are) is in the Varsha that is called after Bharata. Next to it (northwards) is the Varsha called after Himavat. The land that is beyond Hemakuta is called Harivarsha, South of the Nila range and on the north of the Nishadha isamountain, O king, called Malyavat that stretches from east to west. Beyond Malyavat northwards is the mountain called Gandhamadana.4Between these two (viz., Malyavat and Gandhamadana) isaglobular mountain called Meru made of gold. Effulgent as the morning sun, it is like fire without smoke.5It is eighty-four thousand Yojanas high, and, O king, its depth also is eighty-four Yojanas. It standeth bearing the worlds above, below and transversely. Besides Meru are situated, O lord, these four islands, viz., Bhadraswa, and Ketumala, and Jamvudwipa otherwise called Bharata, and Uttar-Kuru which is the abode of persons who have achieved the merit of righteousness. The bird Sumukha, the son of Suparna, beholding that all the birds on Meru were of golden plumage, reflected that he should leave that mountain inasmuch as there was no difference between the good, middling, and bad birds. The foremost of luminaries, the sun, always circumambulates Meru, as also the moon with (his) attendant constellation, and the Wind-god too. The mountain, O king, is endued with celestial fruits and flowers, and it is covered all over with mansions made of furnished gold. There, on that mountain, O king, the celestials, the Gandharvas, the Asuras, and the Rakshasas, accompanied by the tribes of Apsaras, always sport. There Brahman, and Rudra, and also Sakra the chief of the celestials, assembled together, performed diverse kinds of sacrifices with plentiful gifts. Tumvuru, and Narada and Viswavasu, and the Hahas and the Huhus, repairing thither, adored the foremost of the celestials with diverse hymns. The high-souled seven Rishis, and Kasyapa the lord of creatures, repair thither, blessed be thou, on every parva day. 1 Upon the summit of that mountain, Usanas, otherwise called the Poet, sporteth with the Daityas (his disciples).2The jewels and gems (that we see) and all the mountains abounding in precious stones are of Meru. Therefromafourth part is enjoyed by the holy Kuvera. Onlyasixteenth part of that wealth he giveth unto men. On the northern side of Meru isadelightful and excellent forest of Karnikaras, covered with the flowers of every season, 3and occupyingarange of hills. There the illustrious Pasupati himself, the creator of all things, surrounded by his celestial attendants and accompanied by Uma, sporteth bearingachain of Karnikara flowers (on his neck) reaching down to his feet, and blazing with radiance with his three eyes resembling three risen suns. Him Siddhas truthful in speech, of excellent vows and austere ascetic penances, can behold. Indeed, Maheswara is incapable of being seen by persons of wicked conduct. From the summit of that mountain, likeastream of milk, O ruler of men, the sacred and auspicious Ganga, otherwise called Bhagirathi, adored by the most righteous, of universal form and immeasurable and issuing out with terrific noise, falleth with impetuous force on the delightful lake of Chandramas.4Indeed that sacred lake, like an ocean, hath been formed by Ganga herself. (While leaping from the mountains), Ganga, incapable of being supported by even the mountains, was held forahundred thousand years by the bearer of Pinaka on his head. 1 On the western side of Meru, O king, is Ketumala.2And there also is Jamvukhanda. Both are great seats of humanity, O king.3There, O Bharata, the measure of human life is ten thousand years. The men are all ofagolden complexion, and the women are likeApsaras. And all the residents are without sickness, without sorrow, and always cheerful. The men born there are of the effulgence of melted gold. On the summits of Gandhamadana, Kuvera the lord of the Guhyakas, with many Rakshasas and accompanied by tribes ofApsaras, passeth his time in joy. Besides Gandhamadana there are many smaller mountains and hills. The measure of human life there is eleven thousand years. There, O king, the men are cheerful, and endued with great energy and great strength and the women are all of the complexion of the lotus and highly beautiful. Beyond Nila is (the Varsha called) Sweta, beyond Sweta is (the Varsha called) Hiranyaka. Beyond Hiranyaka is (the Varsha called) Airavata covered with provinces. The last Varsha in the (extreme) north and Bharata's Varsha in the (extreme) south are both, O king, of the form ofabow. These five Varshas (viz., Sweta, Hiranyaka, Elavrita, Harivarsha, and Haimavat-varsha) are in the middle, of which Elavrita exists in the very middle of all. Amongst these seven Varshas (the five already mentioned andAiravata and Bharata) that which is further north excels the one to its immediate south in respect of these attributes, viz., the period of life, stature, health, righteousness, pleasure, and profit. In these Varshas, O Bharata, creatures (though of diverse species) yet, live together. Thus, O king, is Earth covered with mountains. The huge mountains of Hemakuta are otherwise called Kailasa. There, O king, Vaisravana passeth his time in joy with his Guhyakas. Immediately to the north of Kailasa and near the mountains of Mainaka there isahuge and beautiful mountain called Manimaya endued with golden summits. Beside this mountain isalarge, beautiful, crystal and delightful lake called Vindusaras with golden sands (on its beach). There king Bhagiratha, beholding Ganga (since) called after his own name, resided for many years. There may be seen innumerable sacrificial stakes made of gems, and Chaitya tree made of gold. It was there that he ofathousand eyes and great fame won (ascetic) success by performing sacrifices. There the Lord of all creatures, the eternal Creator of all the worlds, endued with supreme energy surrounded by his ghostly attendants, is adored. There Nara and Narayana, Brahman, and Manu, and Sthanu as the fifth, are (ever present). And there the celestial stream Ganga having three currents,4issuing out of the region of Brahman, first showed herself, and then dividing herself into seven streams, became Vaswokasara, Nalini, the sin-cleansing Saraswati, Jamvunadi, Sita, Ganga and Sindhu as the seventh. The Supreme Lord hath (himself) made the arrangement with reference to that inconceivable and celestial stream. It is there that 1 sacrifices have been performed (by gods and Rishis) onathousand occasions after the end of the Yuga (when creation begins). As regards the Saraswati, in some parts (of her course) she becometh visible and in some parts not so. This celestial sevenfold Ganga is widely known over the three worlds. Rakshasas reside on Himavat, Guhyakas on Hemakuta, and serpents and Nagas on Nishadha, and ascetics on Gokarna. The Sweta mountains are said to be the abode of the celestial and the Asuras. The Gandharvas always reside on Nishadhas, and the regenerate Rishis on Nila. The mountains of Sringavat also are regarded as the resort of the celestials. "'These then, O great king, are the seven Varshas of the world as they are divided. Diverse creatures, mobile2and immobile, are placed in them all. Diverse kinds of prosperity, both providential and human, are noticeable in them. They are incapable of being counted. Those desirous, however, of their own good believe (all this), I have now told thee of that delightful region (of land) of the form ofahare about which thou hadst asked me. At the extremities of that region are the two Varshas, viz., one on the north and the other on the south. Those two also have now been told to thee. Then again the two islands Naga-dwipa and Kasyapa-dwipa are the two ears of this region of the form ofahare. The beautiful mountains of Maleya, O king, having rocks like plates of copper, form another (prominent) part of Jamvudwipa that having its shape resemblingahare.'"
အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်းပင်လျှင်- သက္ကတ ဘာသာဖြင့် သုမေယု၊ မဟာမေယု ခေါ်သော မြင့်မိုရ်တောင် သည် ယူဇနာပေါင်း ၈၄,၀၀၀ နှင့် နတ်ပြည် အထပ်ထပ် ရှိနေပုံကို အောက် ဖေါ်ပြပါ ပုံတွင် မြင်တွေ့ နိုင်ပါ၏။ ဖေါ်ပြပါပုံသည် ဂျိန်း ပေစာတို့တွင် တွေ့ရသော မြင့်မိုရ် တောင် ပုံ ဖြစ်၏။ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mount_Meru.jpg
ထိုနည်းတူပင် မြင့်မိုရ် တောင်ကို ဗဟိုပြုလျှက်- Uttarakuru ဥတ္တရကုရု
ခေါ် မြောက်ကျွန်း၊ Bharata/ Jambudipa ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ယျာ တောင်ကျွန်း စသော ကျွန်းကြီး ၄-ကျွန်း တည်ရှိပုံ ဖေါ်ပြ ထားသည် ကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရပါ၏။ (Ref: http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/231_Asian_Religious_Mappaemundi_1_files/droppedImage.png)
ဆက်လက်၍ လည်း အောက်ပါ တောင်ကြီး ၇-သွယ်က ပတ်ချာရံထားကြောင်း ဆိုထားပါ၏။ http://www.palikanon.com/english/pali_names/s/sineru.htm နှင့် http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/231_Asian_Religious_Mappaemundi_1.html တွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
ယုဂန္ဓရ တောင် Yugandhara
ဣဿ ဒါရတောင် Isadhara
ကာရ ၀ိက တောင် Karavīka
သုဒဿန တောင် Sudassana
နေမိန္ဒရ တောင် Nemindhara
၀ိနာတက တောင် Vinataka
အာသက္ကံဏ တောင် Assakanna
ဘူတန် လူမျိုးတို့၏ မြင့်မိုရ် တောင်မှာလည်း ဤသဘော အတိုင်းပင် ဖြစ်၏။ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bhutanese_thanka_of_Mt._Meru_and_the_Buddhist_Universe.jpg
ဂျပန် လူမျိုးတို့က လည်း (Shumisen) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၄င်းသည် ကောင်းကင်၊ ငရဲ နှင့် လူ့ပြည်တို့ ကို ဆက်သွယ်ထားသည် ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနည်းတူပင် မြင့်မိုရ် တောင်ကို ဗဟိုပြုလျှက်- နေလ နက္ခတ် တာရာများ သွားလာ လည်ပတ် လျှက် ရှိသည်ဟုလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ဂျိန်း ဘာသာတွင် ဖေါ်ပြထားပါ သေးသည်။
အေဒီ ၅၀၀ ခုနှစ် (ဗုဒ္ဓပေါ်ပြီး- အနှစ် ၁၀၀၀ ခန့်တွင်) ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် နက္ခတ် ဗေဒင် ပညာ ၏ မီးရှုးတန်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဆရာ ၀ါဟရ မိဟိရ အနေဖြင့် - ပဉ္စ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း အခန်း ၁၃ တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
“သံလိုက် ၂-ခုတို့၏ အကြားတွင် တွဲလောင်းကျနေသော သံချောင်း ငယ်တစ်ခု ကဲ့သို့ - ကမ္ဘာသည် အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်တွင် ဘောလုံး သဖွယ် တွဲလဲ တည်ရှိသည်။ အရပ် မျက်နှာ အားလုံးတွင် တောတောင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ တောင်တန်း၊ မြို့ရွာများနှင့် ကမ္ဘာ တစ်ခုလုံး အား ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ မေယုသည် ၀င်ရိုး အနေဖြင့် တည်သည်။” “အသူရာတို့သည် ထိုဘောလုံး သဏ္ဌာန် ကမ္ဘာတွင် ခြေထောက်တင်လျှက်- ကောင်းကင်သို့ ဦးခေါင်းမှ ညွှန်၍ ရှိနေကြသည်။ ---- နတ်တို့သည်လည်း ထိုသို့နေလျှက်- သူတို့မှ အသူရာများကို ကြည့်လျှင်- ဇောက်ထိုး နေသည်ဟု မြင်ရသကဲ့သို့၊ အသူရာတို့မှ နတ်တို့အား ကြည့်လျှင် လည်း ထိုသို့ မြင်ရသည်။” (ဤနေရာတွင်- အသူရာတို့သည် တောင်ပိုင်းသား တို့ကို ရည်ညွှန်း၍- နတ်တို့သည် မြောက်ပိုင်းသား တို့ကို ရည်ညွှန်း ထားသည်ကို သတိပြု မိနိုင်သည်။)
ထိုမျှ မကသေး - ဆရာ မိဟိရအနေဖြင့်-
မြင့်မိုရ် တောင် မေယုသည် ကမ္ဘာကြီး၏ လည်နေသော ၀င်ရိုးမျဉ်း ကြီး ဖြစ်ကြောင်း နှင့် သုမေယု နှင့် ကုမေယု ဆိုသည်မှာလည်း ကမ္ဘာ၏ တောင်မြောက် ၀င်ရိုးစွန်း ၂-ဘက်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မေယုသည် ကမ္ဘာကြီး၏ အလယ် တည့်တည့် နေရာ ဆုံချက် ဖြစ်ကြောင်း တို့ကိုပါ ရှင်းပြခဲ့၏။
ဆရာ ၀ါရဟ မိဟိရ အနေဖြင့် ဆိုထားသည်မှာ
“မာယာ ဒန၀ သူရိယ သိဒ္ဓန္တ” တို့၏ အယူအဆ အတိုင်း- မေယုသည် တောင်နှင့် မြောက်ကို ဆက်လက် ဆန့်သွားလျှက် (၀င်ရိုးစွန်းများ ဆီသို့) ၄င်းတို့သည် ကြယ် နက္ခတ် တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ထားသည့် အနေအတိုင်း ဖြစ်ကာ “ပရာဝဟ ဓါတ်ခေါ် စီးဆင်းမှု ဓါတ်” ကြီးအားဖြင့် ကမ္ဘာအပါအ၀င် ကြယ်တို့ ပါဝင်သော အလုံးအစု ကြီးသည် လည်ပတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်”
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် မြင့်မိုရ်တောင်။
အချို့သော ဘာသာဝင်များ မှ- တကယ်မရှိသော မြင့်မိုရ်တောင် ကို ဗုဒ္ဓက ရည်ညွှန်း သည်.. စသည် .. စသည် ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အဓိပ္ပါယ် မရှိသော ဘာသာ ဖြစ်သယောင် တိုက်ခိုက် ရေးသား ချက်များကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင် ရပါသည်။
ဗုဒ္ဓသည် “သတ္ထာဒေ၀ မနုဿာနံ” ဟူသော လူနတ် သတ္တ၀ါများ၏ ဆရာ ဖြစ်၍- အခြား ဘာသာများ ၏ ဘုရားများ ကဲ့သို့ ထာဝရ ဖန်ဆင်းရှင်မျိုး မဟုတ်ပါပေ။
ထိုဖန်တီးရှင် ကိုးကွယ်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မှတ်ချက် ပေးစရာ မရှိပါ။ မိမိယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ် နိုင်ခွင့်သည် လူတိုင်းတွင် ရှိပါ၏။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့ နားလည် ထားရမည်မှာ- ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဆရာ ဖြစ်သဖြင့်- ဆရာ ဆိုသည်မှာ မိမိ သင်ကြားသူပေးရမည့် သူ၏ တတ်မြောက် ခဲ့ရာ အတတ်၊ ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိဥာဏ် အတိုင်းအတာ အဆင့်၊ ဘ၀ ပေး အလုပ် အနေအထား တို့နှင့် ကိုက်ညီစွာ နမူနာ ပြု သင်ကြားပြရမည် ကို လူတိုင်း သိပါ၏။
ကွန်ပျူတာ အကြောင်း နကန်း တစ်လုံးမျှ မသိသူအား- CPU (Central Processing Unit) ၏ အလုပ်လုပ် ပုံ နှင့် ယှဉ်တွဲ ၍- အဘိဓမ္မာ သဘောကို မည်သို့ ရှင်းပြနိုင်ပါမည်နည်း။
တစ်ချိန်က ကွန်ပျူတာ စတင်လေ့လာသူ တစ်ဦးအား- သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မှ ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် အကြောင်း ပြောပြသော အခါ- နားလည် သူအနေဖြင့်- ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ ထဲတွင် ရောဂါ ပိုးမွှားများ ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီး နေသည်ဟု နားလည် သွားသည် ကိုလည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့မိပါသည်။
ထိုခေတ် အခါက- သာမာန် လူများ အနေဖြင့် အာကာသ နက္ခတ် ပညာ နှင့် ဂြိုဟ်တို့၏ အကြောင်း၊ နေ နှင့် စကြ၀ဠာ တို့ အကြောင်းကို သမားရိုးကျ ယုံကြည်မှု ဖြင့်သာ သိထားကြပြီး၊ ရှင်းပြပါကလည်း နားလည် နိုင်စရာ အကြောင်း မည်သို့မျှ မရှိသည်ကို- အချိန်ကုန်ခံ ရှင်းပြနေမည့် အစား- ၄င်းလက်ခံ ထားသော အချက်များကို နမူနာ ထားလျှက်- အကျိုးရှိမည့် သစ္စာတရားကို ဟောကြားခြင်းက များစွာ ပို၍ သဘာဝ ကျသည် မဟုတ် ပါလော။
ဗုဒ္ဓ ခေတ်အခါက - အိန္ဒိယ ပြည်တွင် ခေတ်ပညာ တတ်ဆိုသူများမှာ- ပုရာဏ် ကျမ်းများကို တတ်ကျွမ်း သူများ၊ ဂျိန်း ဘာသာဝင် တက္ကဒွန်းများ၊ ပရပိုဒ် များ၊ ဟိန္ဒူ ၀ါဒီ ဗြဟ္မဏ များကို တရား ဟောဆို ရှင်းပြခဲ့ရာတွင်- ထိုသူများ နှင့် အသိဥာဏ်တွင် စွဲဝင် သိရှိထားပြီး ဖြစ်သော မြင့်မိုရ် တောင်ကို ပုံခိုင်း နှိုင်းယှဉ် ခြင်း ဖြစ်ပါမည် ဟု ကျွန်တော် နားလည်မိပါသည်။
ထိုသို့သော ရှင်းလင်းမှု များကို ဗုဒ္ဓသည် မြင်း ဆရာ ကေသီ အား- မြင်းများကို သင်ကြားပုံ ကို နမူနာ ပေး၍ သော်လည်းကောင်း၊ မုဆိုး အား လေးနှင့် မြှား ဥပမာ၊ စောင်း အတတ်ကို ကျွမ်းကျင်သူ အား စောင်းကြိုး နမူနာ၊ လယ်သမား အား လယ်ထွန်တုံး ဥပမာ စသည် ဖြင့် ပြဆို ၍ ရှင်းပြခဲ့သည်ကို စာရှုတို့ သိပြီး ဖြစ်ပါ၏။
သို့သော် အခြားတစ်ဘက်တွင်- အချို့ချို့သော အဌကထာ၊ ဋီကာ များတွင် မြတ်စွာဘုရားသည် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်သို့ ခြေ ၃-လှမ်း ဖြင့် ကြွတော်မူ သည် စသည် တို့သည်လည်း- ဘုရား ဟော ဖြစ်နိုင်ခြင်း မရှိသည်သာ မက- အဌကထာ၊ ဋီကာ များ၏ ဘာသာပြန် - အနက်ချဲ့ ရာတွင် မူလ ဆိုလိုယင်း နှင့် ကွာဟ သွားသည် များ ဖြစ်နိုင်ပါသေး၏။
အဌကထာ ဆရာမြတ်များ၊ ဋီကာ ဆရာမြတ်များ အနေဖြင့်လည်း- ပုရာဏ် ကျမ်း (မြန်မာ အခေါ် ပေါရာဏ) များ၏ အငွေ့အသက် များ လွှမ်းမိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေး၏။
ဘုရားဟော ပါဠိတော်များကို ပေထက် အက္ခရာတင် လျှင် ထိုသို့သော လွဲချော်မှုများ၊ အိန္ဒိယ တွင် ထိုအချိန်ထက် များစွာ စောသော ကာလကပင် လွှမ်းမိုးထားသော ဟိန္ဒူ နှင့် ဂျိန်း ၀ါဒ တို့၏ ရောယှက် လာမှုများ ပါဝင်မည့် အရေးကို သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ရှင် ဗုဒ္ဓသည်- ကြိုတင် သိမြင်တော် မူထားသောကြောင့်- ထိုခေတ် ထိုအခါက ဟိန္ဒူတို့၏ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ စာပေ Holy Language ဖြစ်နေသော တစ်ခုတည်းသော စာပေ ဖြစ်သည့် - သက္ကတ စာပေ ဖြင့် ပေထက် အက္ခရာ တင်ခွင့် မပြုခဲ့ပဲ- နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်တိုင် နှုတ်တိုက် အာဂုံ ဆောင်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည် ဟုလည်း ကျွန်တော့် အနေဖြင့် နားလည် မိပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ဆိုသော် - ဗျိုင်းဆိုသည်မှာ မည်သို့နည်းဟု မမြင်ဘူးသူ မွေးရာပါ အမြင်ဓါတ် ကင်းမဲ့သူ၏ မေးမြန်းမှု အား ဖြေကြားရာတွင် - ဗျိုင်းဆိုသည်မှာ အဖြူရောင် ရှိကြောင်း ပြောရာမှ- အဖြူကိုလည်း မမြင်ဘူးပြန် သဖြင့်- အဖြူရောင် သည် သင် သောက်သုံး သည့် နွားနို့နှင့် တူကြောင်း ရှင်းပြရသော အခါ- မျက်မမြင် အနေဖြင့် ဗျိုင်းသည် နွားနို့ ကဲ့သို့ ဆိမ့်သော အရသာ ရှိသည့် အရည်ဟု နားလည် သွားသည် ကို ကြားခဲ့ဘူးပါလျှင်- --
မြင့်မိုရ်တောင်ကို မျက်စိဖြင့် မမြင်မတွေ့ရဟု မရှိဟု ဆိုကြမည် ဆိုလျှင်- ကျွန်တော် ငယ်စဉ်- က အီကွေတာမျဉ်းကို နားလည် ခဲ့မိသည့် အနေအထားပင် ရှိနေကြ ပါလိမ့်မည်။
ပြဒါးမှ ရွှေ တကယ်ဖြစ်သလား။
လက်ဝဲ- လမ်း၊ လက်ယာ- လမ်း၊ လမ်းကြီး စသည်ဖြင့် အဂ္ဂိရတ် ပညာကို လိုက်စားကြသည် ဆိုသော ဖိုထိုးသူ တို့ကို စာရှုသူ မြန်မာပြည်တွင် တွေ့သိဘူးမည် ထင်ပါ၏။
ပြဒါးမှ ပြဒါးရှင် လုံး လုပ်နိုင်ရန်၊ ပြဒါးမှ ရွှေဖြစ်သည် အထိ လုပ်နိုင်ရန် စသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့်- ဖိုထိုးကြ၏။ သိုသိုသိပ်သိပ် ဖြင့် အောင်မြင်သူ ရှိကောင်း ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း- အများစု အနေဖြင့် မှာမူ- ရွှေကျွေး ပြီးနောက်- အဂ္ဂိရတ် ရွှေ ခေါ် ရွှေပျက် ဖြစ်သွားတတ်သော အနေဖြင့်သာ ချာလည် ချာလည် ဖြစ်၍- ပြဒါးလည်းလွင့်၊ မီးသွေးဘိုး၊ ကျွေးရသော ရွှေဘိုး တို့ဖြင့် မွဲသည်ကသာ များတတ်ကြပါ၏။
မီးအပူပေးလိုက်လျှင် ဘယ်ရောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားတတ်သော ပြဒါး (တစ်နည်းအားဖြင့်- အဂ္ဂိရတ် အခေါ် နဂါး) ကို ရွှေဖြစ်သော အဆင့်သို့ ရောက်အောင် အသာထား၊ အပူပေးသော်လည်း ထွက်မပြေး နိုင်စေရန် အတွက်- တွဲဘက် ထားရသော အကူဆေးကို ချုပ်ဆေး (ဂဠုန်) စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး- ရှင် အဇ္ဇဂေါဏ ကျမ်း၊ ရှင်မထီးကျမ်း၊ ရသေ့ ဦးအောင်ကျမ်း စသည်တို့မှ ညွှန်းဆိုချက်တို့ကို စမ်းတစ်ဝါးဝါး အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ယင်း- ဘ၀ တစ်သက်တာအချိန် အား အကျိုးမဲ့ ကုန်ဆုံး သွားတတ် သူတို့ များလှပါ၏။
“သံသေ- တစ်ရွှေဝ၊ ပြဒါးသေ တစ်ပြေ၀” ဆိုသော စကားများကို စာအုပ်ထဲ၊ အရပ်ထဲတွင် မစားရ ၀ခမန်း၊ ပြောသံ ကြားရသော်လည်း၊ သံကို ကိုင်တွယ် နိုင်နင်း သော အဆင့်၊ စက်မှု သတ္တု ပညာအဆင့် ရှိသော အခြား နိုင်ငံများ အဆင့်သို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံသည် မရောက်ရှိခဲ့။
သံသတ္တု တို့ကို ပြုပြင်သော ပညာသည် Metallurgy Engineering ဖြစ်ပြီး၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ တို့၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်၏။ ပီယ သိဒ္ဓိစွမ်းသည် ဆိုသော သွပ်သေ ဓါတ်လုံး ဆိုသည် များကိုတော့ ကျွန်တော် တွေ့ဘူး၊ မြင်ဘူး၏။ တကယ်စွမ်းမစွမ်း တော့ ကျွန်တော်မသိ။
အမှန်တကယ် ဘ၀တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်က- ကျွန်တော့် ဘခင်၏ ငယ်ဆရာ- ဘုန်းတော်ကြီး အနေဖြင့်- ပြဒါးဖြင့် ဖိုထိုးထားသော ဓါတ်လုံးကို ဓါတ်အောင်ပြီ၊ ဓါတ်သေပြီ ယူဆလျှက် ဓါတ်ဘူးထဲ အမြဲတမ်းထည့်ထား၍ ထိုဓါတ်လုံးရေကို သောက်သုံး ရာမှ- ပြဒါး အဆိပ်သင့်ပြီး- အရှင်လတ်လတ် အသားများ ပဲ့ပုပ် ကျလာခြင်း၊ တပည့်ရင်းများပင် အနားမလာ နိုင်အောင် ပုပ်စော်နံ ဝေဒနာများ ကြာမြင့်စွာ ခံစားပြီးမှ ပျံလွန်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်၏။ Mercury Poisoning မည်မျှ ဆိုးနိုင်သည်ကို ကြီးလာတော့ ဗဟုသုတ အဖြစ်ကြားသိ လာသော်လည်း- ထိုအကြောင်းကို မသိပဲ- ထိုကဲ့သို့ ဓါတ်လုံးရေ စိမ်သောက် နေသူများ အတွက် စိုးရိမ်မိ၏။
ထိုသို့ လုပ်သူများလည်း ယနေ့တိုင် ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်ပါသေး၏။
ကျွန်တော် ငယ်ရွယ်စဉ်က- နားလည် ခဲ့သည်မှာ အဂ္ဂိရတ်၊ ရွှေဖြစ်၊ ငွေဖြစ် ဆိုသည် တို့မှာ ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ ရှိသည်၊ ထိုအဂ္ဂိရတ် ကျမ်းများကို ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်များ ရေးခဲ့သည်၊ ထိုနည်းတူ ဗေဒင် နက္ခတ် ပညာရပ် စသည် တို့မှာလည်း မြန်မာပြည်တွင်သာ ရှိသည်- အခြားနိုင်ငံများတွင် မရှိ- အခြားခြားသော ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ်၊ စူဋ္ဌ ဂန္ဓာရီ၊ မဟာ ဂန္ဓာရီ၊ သိဒ္ဓိ မဟိဒ္ဓိ ပညာရပ်များသည်လည်း မြန်မာတွင်သာ ရှိသည်၊ အခြား နိုင်ငံများတွင် မရှိဟု ဖြစ်သည်။
အနောက်တိုင်းသားတို့သည် ရုပ်ဝတ္ထုသမားများ၊ သိပ္ပံသမားများသာ ဖြစ်၍- နာမ် လောက အကြောင်း၊ ဂန္ဓာရီ အတတ်တို့အကြောင်း နားမလည် နိုင်ဟု ထင်မြင် ခဲ့မိ၏။
သို့သော်လည်း- နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ် တွင် မယောင်မလည် လှည့်ပါတ် ကြည့် ခွင့်များ ရရှိ လာသော အခါ- ကျွန်တော့် အနေဖြင့် မြန်မာတွင်သာ ရှိသည် ဟု ယုံကြည် ခဲ့မိသော ထို ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ် အားလုံးတို့ သည် နိုင်ငံတကာတွင် ရှိနေကြောင်း၊ မြန်မာ့ ပညာတို့ သည်လည်း ၄င်းတို့မှ မြစ်ဖျားခံခဲ့ကြောင်း သိလာရပါတော့၏။
အခြားခြားသော ပညာရပ်များကို အသာထား- လူတိုင်း နှင့် နီးစပ်သော ပညာ ဖြစ်သည့် ဗေဒင်ပညာ တွင်လည်း- ကျွန်တော်တို့သည် ရှေးကျမ်း ဆိုသည် တို့ကို စမ်းတစ်ဝါးဝါး အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ဆိုယင်းဖြင့် သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ရသည်က များလှသည်။
ရှေးကျမ်းတို့က ဆိုလိုရင်းကို ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ သုတေသန ပြုရန် ကြိုးစား ကြရမည့် အစား၊ တစ်နည်းအားဖြင့် တိကျသော နည်းစနစ် ဖေါ်ထုတ်ရမည့် အစား- ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ကျမ်းဘတ်ဘူးသူ၊ ကျမ်းတတ်သူ အချင်းချင်း ပညာပြိုင်ကြခြင်း၊ ငြင်းခုံ ဝေဘန် ကြခြင်း၊ ကျမ်းမှ ဂါထာလိုလို စာသား တို့ကို အလွတ်ကျက်၊ များများ ဖတ်ဘူးသူက- သူ့လောက် မဖတ်ဘူးသူ၊ သူ့ကဲ့သို့ အာဂုံ မရဘူးသူများအား၊ ကျမ်းနှင့် ကိုင်ပေါက် နှိပ်ကွပ်ကာ- သူ့လောက် မတတ်ဟု သတ်မှတ် ကြလျှက်- အမှန်စင်စစ် အာဂလူ မဟုတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ အာဂလူ သတ်မှတ် ထားသော အာဂုံ သမားများ နှင့် ဟိုကျမ်းနှင့် ဒီကျမ်းပေါင်း ကျမ်းပြု နာမည် ခံကာ- ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် တည်ရှိ လာခဲ့သည်က များလှ၏။
မိမိအနေဖြင့် ကိုယ်တွေ့ စင်စစ် မဟုတ်သည် ကိုပင် - ပွဲတွေ့ အကျော် ဟု လည်းကောင်း ရေးသားထားသည့် ရှေးစာအုပ် ဆိုသည်များကို ဖတ်မိရသော အခါ မြန်မာပြည်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက် မတိုးတက်ရခြင်းသည် အလုပ်ထက် အပြော က များခြင်း၊ အမှန်တကယ် ဝေဘန်ပိုင်းခြား တတ်သူတို့၏ အမြင်တွင် မည်သို့မှ မဖြစ်နိုင်သော အဓိပ္ပါယ် မရှိသော များစွာသော ထို ကျမ်းစာအုပ်တို့သည် ပညာပေး ရမည့် အစား၊ ပညာ၏ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးရာအကြောင်း၊ ခေတ်လူငယ်တို့၏ အထင်သေး အမြင်သေး ဖြစ်စေရာ အကြောင်း အထောက်အပံ့ ကို လက်တွေ့ဘ၀ တွင် ဖြစ်လာစေတော့၏။
မြန်မာတို့ အနေဖြင့်- ထိုဝိဇ္ဇာပညာရပ်များကို လိုက်စားသူတို့သည် သဘာဝ၊ ကျိုးကြောင်းကို လေ့လာ ရမည့်အစား အစွဲအလမ်း၊ ယုံကြည်မှု တို့နှင့် ရောယှက် လာခြင်းကြောင့်- ထိုပညာရပ်များသည် လူသားများ လက်ခံနိုင်သော သိပ္ပံ ဖြစ်ရမည့် အစား- ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘိုးတော်လိုလို၊ ဘာလိုလို နှင့် ဇော်ကန့်လန့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွား ကြစဉ်တွင်- အနောက်နိုင်ငံမှ- ဆာ အိုင်းဇက် နယူတန်သည် တစ်ဘက်တွင် ရူပဗေဒ ပညာရှင် ဖြစ်သကဲ့သို့ - အခြားတစ်ဘက်တွင် Philosopher Stone ခေါ် သိဒ္ဓိဝင် ဓါတ်လုံးကို အရူးအမူး လေ့လာလိုက်စားခဲ့သော အဂ္ဂိရတ် ပညာရှင် Alchemist ဖြစ်၏။
နျူတန် သည် လူသားတို့ အတွက် ရူပဗေဒ ပညာတွင် နယူတန်၏ နိယာမများကို ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့၏။
အခြားတစ်ဘက်တွင် သိပ္ပံပညာရှင် လည်းဖြစ်၊ နက္ခတ်ဗေဒင် ပညာရှင်များအဖြစ် ထင်ရှား သူတို့သည်ကား-
ဂယ်လီလီယို Galileo Galilei (1564-1642)
Johannes Kepler (1 571-1630)
Carl Gustave Jung (1875-1961)
အဂ္ဂိရတ် ပညာအားဖြင့်- ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သူ အချို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိကောင်း ရှိမည် ဖြစ်သော် လည်း- လက်တွေ့ အစစ်ခံနိုင်၊ သုတေသန မှတ်တမ်း နှင့် နိုင်ငံတကာ သို့ တင်ပြနိုင်သူ တစ်ယောက်တစ်လေ ကိုမျှတော့ မကြားဘူး မသိဘူး ခဲ့စဉ်တွင်- ဂျပန် နိုင်ငံ တိုကျို ဘုရင့် တက္ကသိုလ် Tokyo Imperial University မှ သိပ္ပံ ပညာရှင် ပါမောက္ခ မစ္စတာ ဟန်တာရို နာဂါအိုကာ Prof. Hantaro Nagaoka သည် ၁၉၂၄- ခုနှစ် မတ်လ တွင်- ပြဒါး နှင့် ဘစ္စမတ် မှ နေ၍- ရွှေဖြစ်အောင် လက်တွေ့ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့၏။
မစ္စတာ ဟန်တာရို နာဂါအိုကာ၏ ပြဒါးမှ ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်ပုံ။
မစ္စတာ ဟန်တာရို နာဂါအိုကာ၏ ပြဒါးမှ ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခြင်းကို ကျွန်တော့် အနေဖြင့် စတင်သိရှိရသည်က Histrory Channel မှ အစီအစဉ် တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်၏။ ထိုကိစ္စကို ဆက်လက် လေ့လာမိတော့- Transmutations of Mercury to Gold ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိပြီး၊ ယခု ဆောင်းပါး အချက်အလက်များမှာ- ထိုဆောင်းပါး ပါ အချက်များ ဖြစ်၍- ဓါတ်ပုံ အချို့ကို Histrory Channel မှ သုံးစွဲထားပါ၏။
၁၉၂၄-မတ်လတွင် မစ္စတာ ဟန်တာရို နာဂါအိုကာ သည် ပြဒါးမှ ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပြီး နောက်၊ ၁၉၂၅-ခုနှစ် မေလ တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ technical details တို့ကို ကြေညာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဟန်တာရို နာဂါအိုကာ နှင့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များသည် တန်စတင် နှင့် ပြဒါး တို့ကို ရေနံဆီ paraffin oil စိမ်ထားသော လျှပ်ကူး နည်းသည့် အလွှာအောက်တွင် ထားလျှက် လျှပ်စစ် ဗို့အား 15 x 104 volts/cm ကို ၄-နာရီကြာ ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် Purple of Cassius test စမ်းသပ်မှုဖြင့်- ကာဗွန်၊ နှင့် ပြဒါး လက်ကျန်တို့ အကြားမှ ရွှေ (Au) ကို စမ်းသပ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရလာသော အမဲရောင် ဒြဗ်ပစ္စည်း ကို လေဟာပြွန်ထဲတွင် သန့်စင်ပြီးနောက်- အောက်စီဂျင် နှင့် မီးရှို့ပစ်ပြီးနောက်- ဟိုက်ဒြို ကလိုရစ် အက်စစ်ဖြင့် ချွတ်လိုက်သော အခါ ရွှေကို အလွှာဖတ်လေးများ အနေဖြင့် တွေ့မြင် ရရှိတော့သည်။
နာဂါအိုကာ မှ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ- iron electrodes များအကြားမှ ပြဒါး အစက်လေးများကို ဖြတ်သန်းစေသော အခါ - ငွေ silver နှင့် အခြားသော ဒြပ်စင်များကို တွေ့ရသေးသည် ဆို၏။ ဆက်လက်၍ Hg lamp မာကြူရီ မီးရောင်အောက်တွင် နာရီ ၂၀၀ နှင့် ဗို့အား ၂၂၆ တွင် ထားလိုက်သော အခါ- ရွှေ တစ်မီလီ ဂရမ် နှင့် ပလက်တီနာမ် တို့ကို တွေ့ရ၏။
ထိုနည်းတူ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ Berlin Technical High School ရှိ Photochemical Department မှ ပါမောက္ခ အဒေါ့ဖ် မီသီး Professor Adolf Miethe ကလည်း စမ်းသပ် အောင်မြင်ခဲ့၏။ ဤအကြောင်းများကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက- Transmutations of Mercury to နှင့် အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ဗွီဒီယို တို့တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါး ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ- ယခုခေတ် သိပ္ပံပညာရပ်များ ပေါ်ထွန်းလာသော ခေတ်အခါတွင် သိပ္ပံပညာကို မတောက်တစ်ခေါက် သိရှိသူ များစွာ တို့အနေဖြင့် ရှေးပညာရပ် များသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်ဟု ယူဆလာခြင်းကြောင့်- ထိုပညာရပ်များ ၏ တန်ဘိုးအမှန်များကို မထေ့မဲ့မြင် ပြုလာကြခြင်း၊- ရှေးပညာရပ်များသည် လက်ဆင့်ကမ်း မှုတို့ ၏ နောက်ကွယ် နှင့် ကျမ်းကို တိုက်ရိုက်အားကိုးမှု များတို့ကြောင့် အထင်သေး ခံနေကြရခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ထိုသူများ ထင်ထားသကဲ့သို့ တန်ဘိုးမဲ့၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ များမဟုတ်သဖြင့်- ထိုပညာရပ်များ ကို ကျမ်းတို့၏ နောက်ကွယ်ကို ထိုးဖေါက်၍- ခေတ်အမြင် ခေတ်အတွေးဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဘန် သုတေသန ပြုသူ စစ်စစ်များ ပေါ်ထွန်းလာ စေရင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဘိုင်အို ရစ်သမ် အပိုင်း (၁) ဗေဒင် မဟုတ်သော- ကံကြမ္မ...